Ungakwelapha kanjani ukushoda kwe-iodine ngokudla nangama-supplements - Ukuphila Kahle | Septhemba 2021
Ukuphuma Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo, Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, Imfundo Yezempilo Ezemidlalo Ezisindayo Cindezela Umphakathi, Ukuphila Kahle Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo
Main >> Ukuphila Kahle >> Ungakwelapha kanjani ukushoda kwe-iodine ngokudla nangama-supplements
Ungakwelapha kanjani ukushoda kwe-iodine ngokudla nangama-supplements
Yini iodine? | Ukushoda kwe-iodine | Izincomo zokudla kwansuku zonke | Ukudla | Izithasiselo
Iodine yisakhi esibalulekile semizimba yethu, futhi isiza ukugcina imisebenzi eminingi yomzimba. Ukudla okunothe i-iodine kuyisisekelo sokudla okunempilo, yize kungebona bonke abathola okwanele kwalesi sakhi njalo. Uma ufuna ukufunda kabanzi ngezimpawu zokushoda kwe-iodine, izindlela zemvelo zokungenisa iodine ekudleni, nezinhlobo ezahlukahlukene zezithako ze-iodine ezitholakalayo, qhubeka ufunde.
Iodine ingumbiwa wamaminerali obalulekile ekukhiqizweni kwamahomoni wegilo i-triiodothyronine (T3) ne-thyroxine (T4) . Kuyisakhiwo sokulala, imetabolism, kanye nokukhula okuphelele nentuthuko. Iningi labantu lithola iodine eyanele njalo, yize, kwezinye izimo, ukwengeza iodine kungadingeka ukulwa nokuntuleka.
Kuyini ukushoda kwe-iodine?
Uma unenkinga ye-iodine, umzimba wakho awutholi iodine eningi njengoba udinga. Isizathu esivame kakhulu sokushoda kwe-iodine kungenxa yokushoda kwe-iodine ekudleni, kusho UKasey Nichols , I-NMD, ogxile kwezokwelapha kwe-naturopathic. Ukushoda kwe-iodine kungaholela ezimeni ezinzima zezokwelapha. Ngenhlanhla, ngenxa yokufakwa kwe-iodine kusawoti wethebula ngo-1924, ukuntuleka kwe-iodine e-United States akuvamile.
Yize iningi labantu baseMelika lithola iodine eyanele ngokudla kwendabuko kwaseNtshonalanga, kubalulekile ukuqonda izimpawu ezihambisana nokungalingani kwe-iodine nokuthi kungayithinta kanjani impilo yakho yonke.
mangaki ama-melatonin engingawathatha ngasikhathi sinye
Ukuzuza isisindo, ubunzima bokufunda, ukuthola amakhaza kaningi, nokukhathala kuyizimpawu ezivamile zokushoda kwe-iodine. Esinye sezimpawu ezinzima kakhulu nezivelele zokushoda kwe-iodine isikhwehlela , okuyiqhubu entanyeni elibangelwa indlala yegilo eyandisiwe. Umuntu ongenayo iodine unengozi eyengeziwe yezinye izifo ze-thyroid, njenge i-hypothyroidism (isifo se-thyroid esibangelwa ukukhiqizwa okwanele kwehomoni yegilo). Endabeni yezingane ezikhulayo, ukuntuleka okukhulu kwe-iodine kungadala ezinye izinkinga zempilo ezifana ukukhubazeka kwengqondo , ukukhula kancane kwengqondo, noma ukukhula okungakhuli.
Ukwelapha ukushoda kwe-iodine, umuntu angakhuphula ukudla kwabo ukudla okune-iodine ethile, noma athathe izithasiselo ze-iodine.
Ngazi kanjani ukuthi ngidinga iodine?
Isinyathelo sokuqala sokuthola ukuswelakala kwe-iodine ukuxhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo. Uzokwazi ukuhlola amazinga akho e-iodine ngezindlela ezahlukahlukene zokunquma ukuthi awunayo iodine yokudla. Kukhona izivivinyo ezimbalwa ezahlukahlukene ezingasiza ngale nqubo.
kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-xanax xr iqale ukusebenza
Ukuhlolwa okubili okuvame kakhulu kwe-iodine ukuhlolwa komchamo nokuhlolwa kwegazi, okuyizindlela zombili ezisheshayo nezilula zokuhlola amazinga e-iodine. Kodwa-ke, ukuhlolwa kwe-urinalysis kungenzeka kungabi okunembile njengokuhlolwa kwegazi. Enye inketho yokujula kokulayisha umchamo ngokujulile, okukhombisa ukugxila kwe-iodine emchameni wakho ngaphezu kwamahora angama-24. Lokhu ukuhlolwa okunembe kakhulu, yize kungaba yinto ephazamisayo ukuthola wonke amasampula omchamo usuku lonke. Okokugcina, ukuhlolwa kwe-iodine patch nakho kuthatha cishe amahora angama-24 ukuphothula, kepha akunembile. Ngalesi sivivinyo, udokotela wakho uzopenda isiqeshana sesikhumba nge-iodine futhi abone ukuthi umzimba usimunca ngokushesha kangakanani.
Ngokuya ngemiphumela yalezi zivivinyo nezimpawu zesiguli, udokotela kungadingeka enze ezinye izivivinyo njenge- Ukuhlolwa kwe-TSH ukunquma amazinga ama-hormone e-thyroid nokuthi kungenzeka kanjani ukuthi athintwe amazinga aphansi e-iodine.
Ngidinga iodine engakanani?
Njengoba iodine iyinto edingekayo ye- ukusebenza kahle kwe-thyroid nokukhula kwentuthuko, inani le-iodine umuntu alidingayo lincike esigabeni sempilo yakhe.
Ngezansi kunohlu lokudla okunconywayo kwansuku zonke kokusetshenziswa kwe-iodine, ngokusho kwe- Izikhungo Zikazwelonke Zezempilo :
Izincomo zokudla nsuku zonke iodine
Isigaba sempilo Ukuncoma ukudla kwansuku zonke
Izelwe izinyanga eziyisithupha 110 mcg
Izinsana izinyanga ezingu-7-12 130 mcg
Izingane ezineminyaka engu-1-8 90 mcg
Izingane ezineminyaka engu-9-13 120 mcg
Intsha iminyaka eyi-14-18 150 mcg
Abantu abadala 150 mcg
Abesifazane abakhulelwe 220 mcg
Abesifazane abancelisayo 290 mcg
Qaphela: Abesifazane abakhulelwe nabancelisayo badinga i-iodine kakhulu, njengoba amazinga abo e-iodine edlulisela enganeni yabo ngesikhathi sokukhula. Ngenxa yalokhu, abesifazane abancelisayo banenani eliphakanyiswe kakhulu lokusetshenziswa kwe-iodine ukuqinisekisa ukuthi ubisi lwabo lwebele luqukethe iodine eyanele ingane yabo.
Ingakanani iodine eyeqile?
Izidingo ezinkulu ze-iodine nazo ziyaguquguquka ngesigaba sempilo. Isibonelo, ingane encane akufanele yeqe ama-300 mcg we-iodine ngosuku, ngenkathi umuntu omdala okhule ngokugcwele enomkhawulo ongaphezulu we-1,100 mcg. Iodine eningi kakhulu ingaveza izimpawu ezifanayo njengokushoda kwe-iodine, njenge-goiter noma i-hyperthyroidism.
Yimiphi imithombo emihle ye-iodine ekudleni?
Usawoti wetafula i-iodized uxazulule izinkinga eziningi zokushoda kwe-iodine kuma-20s, idatha iphakamisa inkinga yokushoda kwe-iodine ingahle ivuseleleke e-U.S njengoba abathengi abaningi bekhetha usawoti we-kosher non-iodized usawoti wasolwandle.
Ngenhlanhla, kunokudla okuningi okune-iodine etholakalayo ngaphandle kukasawoti. Ungabheka kwimikhiqizo yobisi (ikakhulukazi ubisi namaqanda) kanye nokudla kwasolwandle (inhlanzi, imfanzi nolwandle) ukufaka iodine eyengeziwe ekudleni kwakho. Izithelo nemifino nakho kuyimithombo yokudla enhle ye-iodine, ikakhulukazi ubhontshisi we-lima, ubhanana noma ummbila.
Okunye kokudla okune-iodine okunothe kakhulu kanye namaphesenti awo amanani ansuku zonke (% DV) abhalwe ngezansi. Lezi zinombolo zivela ku- Izikhungo Zikazwelonke Zezempilo izincomo zokusetshenziswa kokudla kwe-iodine.
Ukudla Iodine micrograms ngokusebenza ngakunye Amaphesenti inani lansuku zonke (% DV)
I-Seaweed (Nori, Kombu, Wakambe, Arame) Ububanzi obuphakathi kuka-16-2,984 mcg nge-1 gram yotshani lwasolwandle 11% -1.989%
Ikhodi I-99 mcg ku-3 oz yekhodi ebhakwe 66%
Ubisi 56 mcg ngekomishi elilodwa lobisi olunamafutha ancishisiwe 37%
Isinkwa I-45 mcg ngezingcezu ezi-2 zesinkwa esimhlophe, esinothile 30%
Imfene 35 mcg nge-3 oz ngayinye yemfanzi 2. 3%
Amaqanda 24 mcg ngeqanda ngalinye 16%
I-Tuna 17 mcg nge-3 oz ye-tuna (ekheniwe ku-oyela) ishumi nanye%
Ubhontshisi weLima 8 mcg inkomishi eyodwa ½ kabhontshisi we-lima obilisiwe 5%
Ukolweni 14 mcg inkomishi elilodwa ½ lommbila onokhilimu 9%
Ibhanana 3 mcg ngebhanana elilodwa amaphesenti amabili
OKUSHIWO: Ingabe usawoti mubi kuwe? Nakhu ukuthi kungani ososayensi bengavumelani
Ungazithatha izithasiselo ze-iodine?
Izithako ze-iodine zitholakala ngaphezu kwekhawunta njengamaphilisi noma amaphilisi. Ezinye zazo zithathwe ku-kelp ecebile nge-iodine (uhlobo lwasolwandle). Le mikhiqizo ayidingi imishanguzo kadokotela, kepha kuyadingeka ukuthi uwahlukanise namanye amafomula we-iodine.
Uyisakhi somzimba esibalulekile emizimbeni yethu, kodwa iodine nayo ingasetshenziswa njengesinqanda-magciwane sosizo lokuqala ukwelapha ukusikeka noma amanxeba amancane nokuvikela ukutheleleka. Ukuthakwa kwe-iodine nezinye izinhlobo ze-iodine ezenziwa ngoketshezi zenzelwe ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela futhi akufanele zingeniswe.
Isixazululo sikaLugol , equkethe i-potassium iodide, ayihloselwe ukusetshenziswa njengesengezo. Ingangeniswa ngaphansi kokuqondisa kukadokotela ekwelapheni i-thyrotoxicosis (isiphepho se-thyroid) noma izimo eziphuthumayo zemisebe. Ungamunci uketshezi oluqukethe iodine ngaphandle kokuholwa nokuqondiswa uchwepheshe wezokwelapha.
ayini amazinga kashukela egazini lesifo sikashukela
Uma uhlose ukuthatha isengezo se-iodine, kungcono ukuthi ufune iseluleko sezokwelapha kumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo noma usolwazi ngezokudla ngemikhiqizo engcono kakhulu ongayisebenzisa, nokuthi imuphi isilinganiso olungele wona. Imvamisa, lezi zinhlobo zezithasiselo ziqukethe okuqukethwe kwe-iodine eyi-150 mcg, okuyinani elijwayelekile le-iodine umuntu omdala okufanele alithole nsuku zonke. Kodwa-ke, wonke umuntu wehlukile uma kukhulunywa ngezidingo zokudla okunempilo, futhi ukudla ukudla okune-iodine eningi kungaba yindlela yokwelashwa engcono kwabanye abantu.
Ukugula kuka-Anthony Kiedis: Kungani Ayiswe Esibhedlela?
U-Austin Bryant Akazisoli Ngokuqala Ngokulimala Kokuqalwa Komsebenzi Wezingonyama
malini ibuprofen isikhathi eside kakhulu
Ngingathatha i-singulair ekuseni
ngidinga incwadi kadokotela yemitha yeglucose
okungcono kumkhuhlane we-tylenol noma ibuprofen
ungaba ne-eczema ne-psoriasis ngasikhathi sinye
yini engingayisebenzisa ukuqeda ukutheleleka ngemvubelo